Sarkaal ka soo cararay Ururka Al Shabaab oo isku soo dhiibay Dowladda – STAR FM SOMALIA
Sarkaal ka soo cararay Ururka Al Shabaab oo isku soo dhiibay Dowladda
Maxamed Ibraahim Dhuubow oo ka mid ah Saraakiisha Ciidamada Ururka Al Shabaab, ayaa waxaa uu isku soo dhiibay Ciidanka Dowladda Somaliya ee ku sugan Degmada Diinsoor Ee Gobolka Baay.
Sarkaalkan, ayaa gelinkii dambe ee Isniintii lagu soo dhaweeyay Degmadaasi, xilli xiriir uu la soo sameeyay Saraakiisha Ciidamada Dowladda, ee hawlaha shaqo u joogga Diinsoor.
Saraakiisha, ayaa Maxamed Ibraahim Dhuubow u ballanqaaday in la nabadgelin doono, haddii uu ka tanaasulo fekerka khaldan ee Al Shabaab, isla-markaana uu iskusoo dhiibo Dowladda.
Korneyl C/raxmaan Sheekh Maxamed oo ka mid ah Saraakiisha Ciidanka Xoogga ee ku sugan Degmada Diinsoor, ayaa maanta sheegay in Sarkaalkaasi ay si diiran ugu soo dhaweeyeen Degmadaasi.
Korneyl C/raxmaan Sheekh Maxamed oo la hadlay Warbaahinta, ayaa tilmaamay in Dhuubow ay su’aalo ku weydiinayaan xabsi, ay ku leeyihiin Degmada Diinsoor.
Wax badan lagama oggo sababta uu ninkan kaga soo cararay Ururka Al Shabaab, isuguna soo dhiibay Dowladda Somaliya, marka laga soo taggo in Saraakiisha Dowladda uu u sheegay, in uu ka tanaasulay fekerkii Shabaab.
Dhuubow, ayaa noqonaaya Sarkaalkii labaad oo ka tirsan Ururka Al Shabaab, oo muddo toddobaad gudahii ah isugu soo dhiibo Dowladda Somaliya.
Maxamed Cali Maxamed (Farey) oo ka tirsan Saraakiisha Ciidamada Ururka Al Shabaab Ee Gobolka Gedo, ayaa maalintii Arbacada isku soo dhiibay Ciidanka Xoogga Dalka ee degan Degmada Baardheere, iyadoona Jimcihii loo soo gudbiyay Magaalada Muqdisho.